ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5သင့်အသက်တာ၏မေတ္တာကိုရှာပါရန်နည်းလမ်းများ!
ငါတို့ရှိသမျှသည်အစဉ်မပြတ်များမှာ, ဖြစ်စေမသိစိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်ယုံကြည်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့, တဦးကိုများအတွက် Lookout အပေါ်. ကျွန်တော်နှင့်အတူငါတို့အသက်မျှဝေနိုင်ပါသည်နှင့်အတူအဘယ်သူ Fluffy နှင့်အတူအပြားရှိကြောင်နေထိုင်ခြင်း၏ကံကြမ္မာဘဝ၌အမြဲတည်သောကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်မည်သူထိုပုဂ္ဂိုလ်. ဒါကတော့ကံကြမ္မာကိုရှောင်ရှားဖို့ပဲငါးခုနည်းလမ်းနှင့်အဘို့အဆပ်ဖို့ကြောင်အစားအစာ၏မရေမတွက်နိုင်သောပမာဏသာရှိခြင်း!
ညဉ့်အခါ Class ကိုလုပ်ပါ
ဘုံအကျိုးစီးပွားဒီမှာသော့ချက်ဖြစ်သည်. ကဓာတ်ပုံနဲ့သို့မဟုတ်ဖန်တီးမှုအရေးအသားရှိမရှိ, အမြဲတမ်းသင့်အကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်နွယ်သောညဉ့်အခါလူတန်းစားကိုရွေးချယ်ပါ. ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုရှာတွေ့ soulmate မှကြွလာသောအခါနားလည်မှုစာချွန်လွှာကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်၏. သင်တို့သည်ဤမျှအများအပြားအေးမြအမျိုးအစားများအချင်းချင်းဆီသို့ဦးတည် gravitate နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောဆိတ်ငြိမ်ကြားဖူးတယ်အချင်းချင်းဆီသို့ဦးတည် gravitate ဘာကြောင့်ဖြစ်သည့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရရန်ရှိသည်. သင်ရွေးချယ်ပါကဒါကြောင့်သင်ဟာသင့်ကိုယ်သင်ကစိတ်ဝင်စားနေသောညဉ့်အခါလူတန်းစားသင့်ကိုယ်သင်လိုလူကိုတွေ့လိမ့်မည်သည့်အခြေအနေကိုတိုးပွါး.
ယမကာ / ဒုတ်
သူတို့ကလူတွေကိုသူတို့တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်သို့မဟုတ်တစ်ခုခုရှိတယ်ထင်စေခြင်းငှါ, ကြောက်ရွံ့ရိုသေသောကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်လူတို့သည်ယခုလောက်အဖျော်ယမကာနှင့်ကလပ်အသင်းအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမတက်ကြဘူး. ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်စိမ်းလန်းနိုင်မည့်ဒါပေမဲ့သူတို့နေဆဲနေရာများ. သောက်စရာစီးဆင်းအဖြစ်လူမျိုးအဖြစ်များစွာသောလူသူတို့၏အမျိုးအထင်သို့မဟုတ်ထိုသဘောရှိကြသေးလူကိုခရီးဦးကြိုခြင်းငှါ, ကြီးစွာသောနေရာများဒါကြောင့်အဘယ်သို့ပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်စရာအဘယ်အရာကိုတစ်ဝက်ကိုစိုးရိမ်လေ့မရှိကြ. သိသာထင်ရှားတဲ့ထိုနေ့ညဉ့်သူတို့နှင့်အတူအိမ်ပြန်သွားအကြံပေးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နံပါတ်မယူလို. ဒါဟာတစ်ခုခုရဲ့ start ဖြစ်နိုင်.
ကအသံကြောင့်လူအများစုငြီးငွေ့စရာအဖြစ်သူတို့၏အသက်တာ၏မေတ္တာကိုရှာတွေ့ကြဘူးဘယ်မှာအလုပ်ဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်သင်ချစ်သောသူနှင့်သင်ကြိုက်သူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူကို click ပါလိမ့်မယ်တကယ့်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ရန်ကြိုးစား. ထိုအသင်သည်ထိုသူတို့ပတ်လည်မှာရှက်တတ်မယ်ဆိုရင်ကလေးတွေ, စိတ်မပူပါနဲ့. ကဖြစ်ပျက်ဖို့ရည်ရွယ်လျှင်, ကဖြစ်ပျက်လိမ့်မယ်. ထိုအလျှင်မ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ပင်လယ်မှာပိုပြီးငါးများအများအပြားရှိနေသေး.
အဆိုပါ gigging circuit ကိုလူတွေ့ဆုံဘို့စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်. သင်နှင့်တူတစ်ခုခုဟုရေခဲကိုချိုးနိုင်သာသော bar မှာ circuit ကိုတူဒါဟာင်, “ငါသည်သင်တို့ကိုကစားကြောင်း riff ချစ်တော်မူ၏။” ဒါဟာလည်းထိုသို့တူရိယာသင်ယူလမ်းတစ်လျှောက်တစ်ဦးနှင့်မိတ်ဆွေစာရေးခရီးဦးကြိုပြုခြင်းကအလွန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, သင်ဟာတမကစားဘူးဆိုရင်, ထိုအရပ်၌ထွက်ရနှင့်အချို့ gigs ပြုပါ.
ငါတဦးတည်းကိုခရီးဦးကြိုသောလေးမျိုးစာရင်းသွင်းခဲ့ကြပေမယ့်နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်အရေးပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏အသက်တာကဖြည့်စွက်မည်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့ကိုဗဟိုပြုကဲ့သို့သင်တို့အနှံ့သို့မလာကြဘူးသေချာစေရန်ရှိသည်. သင်ပဒေသာသင့်အသက်တာတွင်သွားနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကအစည်းအဝေးသင့်မစ်ရှင်၏တစ်ဦးတည်းသာအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်ကြောင်းကိုသေချာစေရန်, မတစ်ခုလုံးကိုမစ်ရှင်. အခြားသောစကားအားဖြင့်သင်တို့ကိုသင်အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့အနာဂတ်စိတ်ကူးကိုဘယ်လိုမင့်လျှင်ပင်ထိုတိုက်ခန်းထဲတွင် Fluffy နှင့်အတူအသက်ရှင်စေခြင်းငှါလုံလောက်ခိုင်မာဖြစ်ကြောင်းပြသနိုင်ဖို့ရှိသည်. သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသားအရေအတွက်စိတ်ချယုံကြည်ပေါ်လာ. ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုအဘယ်အရာမျှမရှိင်.
ချိန်းတွေ့ – သင်သည်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းနေကြ?